Brendan Taylor’s century guides Zimbabwe to 231 - Cricket Country
Brendan Taylor's century guides Zimbabwe to 231
Skipper Brendan Taylor led from the front with an unbeaten century, but Zimbabwe still couldn't manage more than 231 for six in the first one-day international against New Zealand after a horrific start to their innings.
| Updated : October 20, 2011 5:06 PM IST
Brendana Taylor was supported by Forster Mutizwa to guide Zimbabwe to a respectable total of 231 runs Getty Images
Captain Brendan Taylor struck an unbeaten 128 as Zimbabwe recovered from a disastrous start to post 231-6 off 50 overs against New Zealand Thursday in the first of three one-day internationals.
New Zealand debutant Doug Bracewell captured the first three Zimbabwe wickets, but was less successful later in the innings, while Franklin (two wickets) and Andy McKay (one) also inflicted damage. (AFP)
Brief Score: Zimbabwe 231 for 6 in 50 overs (Brendan Taylor 128*, Forster Mutizwa 69; Doug Bracewell 3 for 55) vs New Zealand.
Last updated on October 20, 2011 5:06 PM IST
Brendan Taylor New Zealand Zimbabwe Zimbabwe vs New Zealand
Umar near double-century as Pakistan lead surges to 242 at tea